မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့ နိုင်ငံသားကဒ် ဒါမှမဟုတ် ကိုင်ဆောင်သင့်တဲ့ ကဒ်တမျိုးမျိုး ထုတ်ပေးမယ့် ပန်းခင်းစီမံချက်ကို စစ်ကောင်စီက ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီစီမံချက်နဲ့ တနိုင်ငံလုံး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် ၄ သန်း ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။ ဒီစီမံချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်က နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူတွေ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်တွေ ရနိုင်ဖို့ ပိုပြီးနီးစပ်လာပါပြီလား။ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မမြသဇင်အောင် ကတင်ပြပါမယ်။
တနိုင်ငံလုံးမှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား ၄ သန်းနီးပါး ထုတ်ပေးမယ့် ပန်းခင်းစီမံချက်ကို စစ်ကောင်စီက စတင်လုပ်ဆောင်ပြီလို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။ တနိုင်ငံတဝန်းလုံးလုပ်နေတဲ့ စီမံချက်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူတိုင်းကိုပေးဖို့ လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးခင်ရီက ခုလိုပြောပါတယ်။
"ပန်းခင်းစီမံချက်က နိုင်ငံသားကတ်ရသင့်ရှိတဲ့ သူတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ လူတွေကို လုပ်ပေးတဲ့ အစီအမံပါ။ ဒါတွေက လူမှုစီးပွားဘဝအတွက် အရေးကြီးတယ်လေ။ ဒီဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် တရပ်လဲဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်လည်း လိုအပ်ချက်လဲဖြစ်တယ်လေ။ ဟိုးအရင်ရွေး ကောက်ပွဲတွေမှာလဲ မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ မဲပေးတာတွေကြုံခဲ့တာပေါ့. အကျုံးဝင်တဲ့ သူတွေ အကုန်ပါပါ မယ်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူတိုင်းပါပါမယ်။ ဒေသနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရသင့်တဲ့လူ အကုန်လုံးပေးမှာဘဲလေ။ လတ်တလောမှာ ကျနော်တို့ ကာလလေးတခု တွက်ပြီးတော့ ချောချောမွေ့မွေ့ လုပ်နိုင်ရင် ၃သန်းခွဲနဲ့ ၄သန်းကြားပေးနိုင်တာပေါ့နော်။ ဒါကတော့မြို့နယ်တခုမှာ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲ အားနဲ့တွက်တာပေါ့နော်"
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် မေလ ၅ ရက်မှာ ပန်းခင်းစီမံချက်ကို စတင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် အခုမှ လုပ်ငန်းတွေ စတင်လုပ်နေတာလို့ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောပါတယ်။ ဒီစီမံချက်ကို နိုင်ငံတဝန်းကို ရည်ရွယ်ထား တယ်လို့ သူကပြောပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့ တချို့ဒေသတွေမှာတော့ မစနိုင်သေးပါဘူး။
"အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုက သွားလို့လာလို့ မရတာပေါ့နော်. ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ Stay at tome နေရာတွေလဲများတယ်လေ။ အဲတော့သွားလို့ ပြုလို့မရဘူးပေါ့။ နောက် လူထုကလည်း ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ကတော့ ထပ်ပြီးအသိပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်။ အခုမွေးလာတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ဆုံးတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ရှိတဲ့လူတွေကပျောက်တာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကတော့ဒီဌာနက အမြဲ Update.လုပ်နေ ရမှာဘဲ။ ဒါကြောင့်ဒီဌာနက အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်လုပ်နေရတဲ့ သဘောပါဘဲ။ အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှု ကကိုဗစ်ပေါ့၊ အချို့နေရာတွေကျတော့ လုံခြုံမှု နည်းနည်းလိုတာပေါ့လေ။သွားရ ၊လာရ၊ ကွင်းဆင်းရတာ။"
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လုပ်မယ့်သူတွေဟာ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ မောင်နှမရင်းချာတွေရဲ့ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နဲ့ လိပ်စာတွေ လိုပါတယ်။ အသက်အထောက်အထားအတွက် မွေးစာရင်း ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသားကဒ် ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းထောက်ခံချက် လိုအပ်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်တွင်း နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နဲ့ သွေးအမျိုးအစားလည်း လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကတော့ သန်းခေါင်စာရင်းမရှိရင်လည်း ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းမရှိသူတွေကို စိစစ်ထောက်ခံပေးဖို့ လဝကမြို့နယ် ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ပါတဲ့ ၅ ဦးကော်မတီဖွဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာလို့ သူကပြောပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးလုပ်တဲ့ ပန်းခင်းစီမံချက်မှာ ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ နိုင်ငံသားကတ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးပါတီ အတွင်းရေးမှုး ဦးကျော်စိုးအောင်ကတော့ ပြောပါတယ်။ တန်းတူအခွင့်အရေးအရ နိုင်ငံသားကဒ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ဗီအိုအေ ကိုပြောပါတယ်။
"ရခိုင်မှာရှိတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေပေါ့။ ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ စစ်အစိုးရ တက်တော့မှ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ ပြီးတော့ကျနော်တို့လူတွေဆီက နစက လက်ထက်တုန်းကလည်း နိုင်ငံသားအထောက်အထားတွေ သိမ်း လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ပြန်ထုတ်မပေးဘူး သူတို့ဆီကမွေးလာတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်းထုတ် မပေးဘူး၊ မပေးတော့တချို့တွေက သန်းခေါင်စာရင်း မရှိတာတွေ နိုင်ငံသားကတ်မရတာတွေ တပုံတပန်းကြီးဘဲ။ ခုလောလောဆယ် ပန်းခင်းစီမံကိန်းနဲ့ တနိုင်ငံလုံးပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတော့ သူတို့လည်းရမယ်ဆို ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူထုတွေက မျှော်လင့်ပြီးစောင့်စားနေပေမယ့် လောလောဆယ် ဘာမှတော့ မရှိသေးဘူး ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပင်စည်ပေါက်ပွားတွေဖြစ်တယ်။ ပေးကိုပေးရမှာပေါ့။ သူတို့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးကိုပေးရမှာပေါ့။ ခုမပေးဘူးဆိုတာက အရင်ပေးတဲ့ အစိုးရတွေကမှားလို့ ခုက မှန်လို့လားဆို တာမေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်လာပြီ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက အမျှော် အမြင်ရှိရှိနဲ့ တန်းတူ နိုင်ငံသားပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ရှေ့ဆက်ပြီးပေးရမှာပေါ ဒီလိုဘဲ အကြံပေးချင်တယ်။"
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကို သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောပေမဲ့ စစ်ကောင်စီကတော့ လက်မခံဘဲ ဘင်္ဂလီတွေလို့သာ ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းပါတယ်။ စစ်ကောင်စီလုပ်နေတဲ့ ပန်းခင်းစီမံချက်ကို တစ်နှစ်ခွဲအချိန်ယူပြီး ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်အထိ လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသာမှုတွေရှိတာကြောင့် အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောနေတဲ့ စစ်ကောင်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှတ်ပုံတင် မရှိဘဲ မဲပေးသူ ၄ ဒသမ ၆ သန်းကျော် ရှိတယ်လို့ စိစစ်တွေ့ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီလို မှတ်ပုံတင် မရှိဘဲ မဲပေးသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်အပြီး မကြာခင်မှာဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်တွေ ထုတ်ပေးတဲ့ ပန်းခင်းစီမံချက်ကို စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်အစိုးရတွေ လက်ထက်တုန်းကလည်း အလားတူ စီမံချက်တွေ လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် လက်ရှိ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ယူစဉ်တုန်းက မိုးပွင့်စီမံချက်နဲ့ လူ ၇ သန်းခွဲ နီးပါးကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရ တာဝန်ယူစဉ်မှာလည်း သစ္စာစီမံချက်နဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား ၆ သန်းခွဲ နီးပါး ထုတ်ပေးတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၀ နှစ်ပြည့်ရင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် စလုပ်လို့ရပြီး အသက် ၁၈ နှစ်ပြည်တဲ့အခါ ၁၈ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်နဲ့ လဲလှယ်ရပါတယ်။ အဲဒီကဒ်ပြားတွေရဲ့နောက်မှာ တချို့ကို အသက် ၃၀ ပြည့်ရင် တချို့ကို အသက် ၄၅ နှစ်ပြည့်ရင် ထပ်မံလဲလှယ်ဖို့ မှတ်ချက်တွေ ရေးထားပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတွေ ပျက်စီးတာ၊ မသဲကွဲတာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကဒ်ပြားအသစ်လဲလှယ်ဖို့ သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျ ၄သနျးထုတျပေးရေးမြှျောမှနျးတဲ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြ
မွနျမာတနိုငျငံလုံးမှာ အိမျထောငျစုစာရငျးနဲ့ နိုငျငံသားကဒျ ဒါမှမဟုတျ ကိုငျဆောငျသငျ့တဲ့ ကဒျတမြိုးမြိုး ထုတျပေးမယျ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြကို စဈကောငျစီက ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ဒီစီမံခကျြနဲ့ တနိုငျငံလုံး နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျ ၄ သနျး ထုတျပေးနိုငျမယျလို့မေြျှာလငျ့ထားတယျလို့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ ပွညျသူ့အငျအားဦးစီးဌာနဝနျကွီး ဦးခငျရီက ဗီအိုအမွေနျမာပိုငျးကို ပွောပါတယျ။ ဒီစီမံခကျြအရ ရခိုငျပွညျနယျက နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ရှိသူတှေ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျတှေ ရနိုငျဖို့ ပိုပွီးနီးစပျလာပါပွီလား။ ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို မမွသဇငျအောငျ ကတငျပွပါမယျ။
တနိုငျငံလုံးမှာ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျပွား ၄ သနျးနီးပါး ထုတျပေးမယျ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြကို စဈကောငျစီက စတငျလုပျဆောငျပွီလို့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ ပွညျသူ့အငျအားဦးစီးဌာနဝနျကွီး ဦးခငျရီက ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျးကို ပွောပါတယျ။ တနိုငျငံတဝနျးလုံးလုပျနတေဲ့ စီမံခကျြဖွဈပွီး တညျဆဲ ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသားဥပဒအေရ နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ရှိသူတိုငျးကိုပေးဖို့ လုပျတာဖွဈတယျလို့ ဦးခငျရီက ခုလိုပွောပါတယျ။
"ပနျးခငျးစီမံခကျြက နိုငျငံသားကတျရသငျ့ရှိတဲ့ သူတှေ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ လူတှကေို လုပျပေးတဲ့ အစီအမံပါ။ ဒါတှကေ လူမှုစီးပှားဘဝအတှကျ အရေးကွီးတယျလေ။ ဒီဌာနရဲ့ လုပျငနျးတာဝနျ တရပျလဲဖွဈတယျ။ နိုငျငံတျောလညျး လိုအပျခကျြလဲဖွဈတယျလေ။ ဟိုးအရငျရှေး ကောကျပှဲတှမှောလဲ မှတျပုံတငျမရှိဘဲ မဲပေးတာတှကွေုံခဲ့တာပေါ့. အကြုံးဝငျတဲ့ သူတှေ အကုနျပါပါ မယျ။ နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ရှိသူတိုငျးပါပါမယျ။ ဒသေနဲ့မဆိုငျပါဘူးခငျဗြ။ တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ရသငျ့တဲ့လူ အကုနျလုံးပေးမှာဘဲလေ။ လတျတလောမှာ ကနြျောတို့ ကာလလေးတခု တှကျပွီးတော့ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ လုပျနိုငျရငျ ၃သနျးခှဲနဲ့ ၄သနျးကွားပေးနိုငျတာပေါ့နျော။ ဒါကတော့မွို့နယျတခုမှာ ဘယျလောကျလုပျနိုငျလဲ အားနဲ့တှကျတာပေါ့နျော"
စဈတပျအာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျ မလေ ၅ ရကျမှာ ပနျးခငျးစီမံခကျြကို စတငျဖို့ စီစဉျခဲ့ပမေဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ အခုမှ လုပျငနျးတှေ စတငျလုပျနတောလို့ ဝနျကွီး ဦးခငျရီက ပွောပါတယျ။ ဒီစီမံခကျြကို နိုငျငံတဝနျးကို ရညျရှယျထား တယျလို့ သူကပွောပမေယျ့ စိနျချေါမှုတှရှေိတဲ့ တခြို့ဒသေတှမှောတော့ မစနိုငျသေးပါဘူး။
"အကွီးမားဆုံးစိနျချေါမှုက သှားလို့လာလို့ မရတာပေါ့နျော. ကိုဗဈကာလဆိုတော့ Stay at tome နရောတှလေဲမြားတယျလေ။ အဲတော့သှားလို့ ပွုလို့မရဘူးပေါ့။ နောကျ လူထုကလညျး ပွညျသူ တှအေနနေဲ့ကတော့ ထပျပွီးအသိပေးဖို့လိုတာပေါ့နျော။ အခုမှေးလာတဲ့ သူတှရှေိတယျ။ ဆုံးတဲ့ သူတှရှေိတယျ။ ရှိတဲ့လူတှကေပြောကျတာတှရှေိတယျ။ ဒါတှကေတော့ဒီဌာနက အမွဲ Update.လုပျနေ ရမှာဘဲ။ ဒါကွောငျ့ဒီဌာနက အမွဲတမျးတောကျလြှောကျလုပျနရေတဲ့ သဘောပါဘဲ။ အကွီးဆုံးစိနျချေါမှု ကကိုဗဈပေါ့၊ အခြို့နရောတှကေတြော့ လုံခွုံမှု နညျးနညျးလိုတာပေါ့လေ။သှားရ ၊လာရ၊ ကှငျးဆငျးရတာ။"
နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျပွား လုပျမယျ့သူတှဟော အိမျထောငျစု လူဦးရစောရငျး၊ မိဘနှဈပါးရဲ့ မှတျပုံတငျမိတ်တူ၊ အဘိုးအဘှားတှနေဲ့ မောငျနှမရငျးခြာတှရေဲ့ အမညျ၊ မှတျပုံတငျအမှတျနဲ့ လိပျစာတှေ လိုပါတယျ။ အသကျအထောကျအထားအတှကျ မှေးစာရငျး ဒါမှမဟုတျ ကြောငျးသားကဒျ ဒါမှမဟုတျ ကြောငျးထောကျခံခကျြ လိုအပျပါတယျ။ ရပျကှကျတှငျး နထေိုငျကွောငျး ထောကျခံခကျြနဲ့ သှေးအမြိုးအစားလညျး လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှအေတှကျကတော့ သနျးခေါငျစာရငျးမရှိရငျလညျး ပူးပေါငျးအဖှဲ့နဲ့ ကှငျးဆငျးဆောငျရှကျပေးမယျလို့ ဝနျကွီး ဦးခငျရီက ပွောပါတယျ။ သနျးခေါငျစာရငျးမရှိသူတှကေို စိစဈထောကျခံပေးဖို့ လဝကမွို့နယျ ဦးစီးမှူး၊ မွို့နယျစီမံကိနျးဦးစီးဌာန၊ မွို့နယျကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပျဖှဲ့နဲ့ ရပျကြေး အုပျခြုပျရေးမှူးတို့ ပါတဲ့ ၅ ဦးကျောမတီဖှဲ့ လုပျဆောငျပေးနတောလို့ သူကပွောပါတယျ။
တနိုငျငံလုံးလုပျတဲ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြမှာ ရခိုငျမှာရှိနတေဲ့ နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ရှိတဲ့ မှတျဆလငျတှေ နိုငျငံသားကတျရဖို့ မြှျောလငျ့နတေယျလို့ ဒီမိုကရစေီနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးပါတီ အတှငျးရေးမှုး ဦးကြျောစိုးအောငျကတော့ ပွောပါတယျ။ တနျးတူအခှငျ့အရေးအရ နိုငျငံသားကဒျတှေ ထုတျပေးဖို့ မြှျောလငျ့တယျလို့ ဗီအိုအေ ကိုပွောပါတယျ။
"ရခိုငျမှာရှိတဲ့ အစ်စလမျဘာသာဝငျတှေ ရိုဟငျဂြာလူမြိုးတှပေေါ့။ ခတျေအဆကျဆကျ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံသားတှဖွေဈတယျ။ စဈအစိုးရ တကျတော့မှ ခှဲခွားဆကျဆံခံရ ပွီးတော့ကနြျောတို့လူတှဆေီက နစက လကျထကျတုနျးကလညျး နိုငျငံသားအထောကျအထားတှေ သိမျး လိုကျတယျ။ ပွီးတော့ပွနျထုတျမပေးဘူး သူတို့ဆီကမှေးလာတဲ့ ကလေးတှကေိုလညျးထုတျ မပေးဘူး၊ မပေးတော့တခြို့တှကေ သနျးခေါငျစာရငျး မရှိတာတှေ နိုငျငံသားကတျမရတာတှေ တပုံတပနျးကွီးဘဲ။ ခုလောလောဆယျ ပနျးခငျးစီမံကိနျးနဲ့ တနိုငျငံလုံးပေးမယျဆိုပွီး ပွောထားတော့ သူတို့လညျးရမယျဆို ပွီး ရိုဟငျဂြာလူထုတှကေ မြှျောလငျ့ပွီးစောငျ့စားနပေမေယျ့ လောလောဆယျ ဘာမှတော့ မရှိသေးဘူး ဒီနိုငျငံရဲ့ ပငျစညျပေါကျပှားတှဖွေဈတယျ။ ပေးကိုပေးရမှာပေါ့။ သူတို့ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ပေးကိုပေးရမှာပေါ့။ ခုမပေးဘူးဆိုတာက အရငျပေးတဲ့ အစိုးရတှကေမှားလို့ ခုက မှနျလို့လားဆို တာမေးခှနျး ထုတျစရာဖွဈလာပွီ။ လှတျလပျရေးရပွီးနောကျပိုငျးနိုငျငံခေါငျးဆောငျတှကေ အမြှျော အမွငျရှိရှိနဲ့ တနျးတူ နိုငျငံသားပေးခဲ့တဲ့ အတိုငျး ရှဆေ့ကျပွီးပေးရမှာပေါ ဒီလိုဘဲ အကွံပေးခငျြတယျ။"
ရခိုငျပွညျနယျမှာရှိတဲ့ မှတျဆလငျတှကေ သူတို့ကို သူတို့ ရိုဟငျဂြာလို့ပွောပမေဲ့ စဈကောငျစီကတော့ လကျမခံဘဲ ဘင်ျဂလီတှလေို့သာ ရညျညှနျးသုံးနှုနျးပါတယျ။ စဈကောငျစီလုပျနတေဲ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြကို တဈနှဈခှဲအခြိနျယူပွီး ၂၀၂၂ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျအထိ လုပျပေးမှာဖွဈတယျလို့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဌာနက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲမသာမှုတှရှေိတာကွောငျ့ အာဏာသိမျးခဲ့တယျလို့ပွောနတေဲ့ စဈကောငျစီက ပွီးခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ မှတျပုံတငျ မရှိဘဲ မဲပေးသူ ၄ ဒသမ ၆ သနျးကြျော ရှိတယျလို့ စိစဈတှခေဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျထားပါတယျ။ ဒီလို မှတျပုံတငျ မရှိဘဲ မဲပေးသူတှရှေိခဲ့တယျလို့ ထုတျပွနျအပွီး မကွာခငျမှာဘဲ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျတှေ ထုတျပေးတဲ့ ပနျးခငျးစီမံခကျြကို စတငျတာဖွဈပါတယျ။
အရငျအစိုးရတှေ လကျထကျတုနျးကလညျး အလားတူ စီမံခကျြတှေ လုပျခဲ့တာရှိပါတယျ။ သမ်မတဦးသိနျးစိနျ အစိုးရလကျထကျ လကျရှိ ဝနျကွီး ဦးခငျရီ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး တာဝနျယူစဉျတုနျးက မိုးပှငျ့စီမံခကျြနဲ့ လူ ၇ သနျးခှဲ နီးပါးကို နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျပွား ထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ NLD အစိုးရ တာဝနျယူစဉျမှာလညျး သစ်စာစီမံခကျြနဲ့ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျပွား ၆ သနျးခှဲ နီးပါး ထုတျပေးတယျလို့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ၁၀ နှဈပွညျ့ရငျ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျ စလုပျလို့ရပွီး အသကျ ၁၈ နှဈပွညျတဲ့အခါ ၁၈ နှဈပွညျ့ မှတျပုံတငျနဲ့ လဲလှယျရပါတယျ။ အဲဒီကဒျပွားတှရေဲ့နောကျမှာ တခြို့ကို အသကျ ၃၀ ပွညျ့ရငျ တခြို့ကို အသကျ ၄၅ နှဈပွညျ့ရငျ ထပျမံလဲလှယျဖို့ မှတျခကျြတှေ ရေးထားပါတယျ။ မှတျပုံတငျကဒျပွားတှေ ပကျြစီးတာ၊ မသဲကှဲတာတှဖွေဈနိုငျတာကွောငျ့ ကဒျပွားအသဈလဲလှယျဖို့ သတျမှတျပေးထားတာဖွဈတယျလို့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးတာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။